The Perricone nri ifelata ka FAMOUS | Nutri Nri
Ihe oriri nke Perricone
La Nri Perricone bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na arọ ọnwụ ụzọ si n'ebe taa na ekele ya aha a ọkà mmụta banyere akpụkpọ anụ na ọkachamara n'ihe oriri na-edozi ahụ nke otu aha ahụ. Nri a, na mgbakwunye na ịkwado ọnwụ dị arọ n'oge kachasị dị mkpirikpi, na-eme ka o doo anya na ọ na-enyere aka imeziwanye ọnọdụ uche ma mee ka ikike onye ahụ dị elu dịkwuo elu. Ọ bụ nri amara nke ọma taa kemgbe ọtụtụ ndị a ma ama esorola ya felata ma nweta ihu igwe.
Nri a na-agbali ịgbaso ụdị nri ọtụtụ nri dị ka o kwere mee ma zere slimming usoro nke a na-akpọ nri ọrụ ebube n'oge niile. Otú ọ dị ọ bụ nri a katọrọ ma daa mbà site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọkachamara na ndị ọkachamara n'ihe oriri na-edozi ahụ nke na-ahụ ya dị ka otu nri ọrụ ebube ọzọ nwere mmetụ dị egwu.
1 Kedu ihe bụ nri Perricone?
2 Otu iri nke nri Perricone
3 Perricone nri kwa ụbọchị menu
4 Ọghọm nke nri Perricone
Kedu ihe bụ nri Perricone?
Dr. Perricone rụtụrụ aka na enwere iche iche iri nri nwere ụdị nri dị iche iche nke na-ekwesịghị ịkọ nri kwa ụbọchị nke onye ọ bụla chọrọ ida ọtụtụ ego kilo. Iji zere ibubata ibu na kilo, nri na-adụ ọdụ izere ka o kwere mee oriri shuga ma jiri ngwaahịa ndị ọzọ ahụike dị ka mmanụ a honeyụ ma ọ bụ stevia dochie ya.
Ọ na-atụ aro izere ịwe ọka wit ma ọ bụ ntụ ọka ọka ebe ọ bụ na ha enweghị nri na nri ọtụtụ calorie maka ahu. Ngwaahịa ndị ọzọ amachibidoro ụdị nri a bụ abụba hydrogenated dị ka ọ dị na margarine ma ọ bụ butter.
Otu iri nke nri Perricone
na iche iche iri nri Ihe nri Perricone na-agbachitere bụ ihe ndị a:
na Omega-3 fatty acid Ha bara uru n'ezie maka ahụ ka ha na-enye abụba ndị dị mma na ya. A na-ahụ ha na nri dịka salmọn, tuna, sardines, ma ọ bụ akwa.
Mkpụrụ ndị bara ụba na eriri ma ha na-enye aka igboju agụụ dị ka ọ dị na mkpụrụ osisi apụl na mkpụrụ osisi vaịn.
Mkpụrụ osisi ndị nwere abụba dị ka ube oyibo. Abụba ndị a dị mma maka ahụ ma nyere aka na-achịkwa cholesterol dị n’ọbara.
Ngwa nri dịka cinnamon, nutmeg, ma ọ bụ turmeric. Maka Perricone ngwa nri dị mkpa na nri ha na-enyere aka na-n'ọnụ mmiri etoju shuga n'ime ọbara ma bụrụ ezigbo ihe edochi nnu.
Chili nwere a nnukwu mgbochi mkpali ma na - enyere aka ịmezi metabolism nke na - enye gị ohere iwepu calorie n'ụzọ dị oke ọsọ.
Mkpụrụ dị ka walnuts, almọnd ma ọ bụ mkpụrụ osisi ugu. Ha bara ọgaranya na ezigbo omega 3 abụba na ha nwere nnukwu protein.
Mkpụrụ osisi dị ka agwa ma ọ bụ lentil nwere ọgaranya na fiber na enyemaka ọkụ abụba ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma karịa ụdị nri ndị ọzọ.
Yogọt dị ka ọ bụ a probiotic nri Ọ na - enyere aka melite ahihia nke eriri afọ ma dịkwa ọgaranya na calcium.
Ihe ọka dị ka ọka ma ọ bụ ọka bali, ha na-edozi ahụ ma nwee ọtụtụ eriri.
Akwukwo nri dika broccoli, inine, ma obu letus. Ihe oriri ndị a ha bụ obere kalori ma nwee nnukwu vitamin na eriri.
Perricone nri kwa ụbọchị menu
Ihe oriri na-adụ ọdụ ị drinkingụ mmanya Iko mmiri 2 ozugbo ị biliri, ebe ọ bụ na n'ụzọ a, a na-ewepụ nsị nwere ike ịdị na ahụ.
Nri ụtụtụ: Ọ nwere ike iso otu tortilla atọ doro anya tinye otu nkpuru osisi na iko oatmeal na mmiri ara ehi ma obu yogot. I nweghị ike inweta achịcha, kọfị, ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ.
Nri ehihie: I nwere ike inwe ụfọdụ salmọn emere imi yana akwukwo ndu ndu nke eji mmanu oliv na nkpuru osisi. Ọ dị mkpa ị drinkụ iko mmiri abụọ mgbe ị na-eri nri.
Nri: N'oge nri ahụ, ọ ga-adị mma ka ị were yogot eke na-esote otu mkpụrụ osisi na iko mmiri.
Nri abalị: A na-ahapụ ya ka o rie ụfọdụ tuna tuna tinyere salad na-acha akwụkwọ ndụ nke ejiri mmanụ oliv na mkpụrụ osisi. Drinkụọ mmanya Iko mmiri 2 mgbe ị na-eri nri.
Hapụrụ ya iri n’etiti ụtụtụ ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ma ọ bụ mkpụrụ osisi iji mejuo agụụ ma ghara ịbịaru agụụ n'oge nri, ebe ọ dị mkpa ị toụ ihe dị ka lita mmiri abụọ kwa ụbọchị iji mee ka ahụ nwee ume zuru oke.
Ọghọm nke nri Perricone
Dị ka nri ọ bụla a na-akpọ nri ọrụ ebube, awade ezigbo nsonaazụ n'oge kasị nso. Kpọmkwem, nri nri Perricone na-ekwe nkwa ịhapụ mmadụ ole na ole Kilo 8 naanị n’ime otu ọnwa. Eziokwu a na - akpata na ọ bụrụ na mgbanwe adịghị n'agbụ iri nri, ị ga - ejighachi ibu niile furu efu n'ihi ụjọ ahụ. rebound mmetụta. O doro anya na ọ bụ ihe egwu kachasị dị n'ụdị nri a, yabụ ọ dị mkpa ịgbanwe agwa mgbe nri gwụchara ma họrọ nri kwesiri ekwesi iji nyere gị aka ịnọgide na-enwe ezigbo ibu yana omume mmega ahụ n'ụzọ oge niile. .
Ihe ojoo ozo di na ya bu nri na-ezighi ezi nakwa na ọ naghị ewepụta ihe niile dị mkpa n’ahụ. Ọ bụ ya mere o ji dị ize ndụ ịgbatị ihe oriri a ogologo oge ebe ọ bụ na ahụ nwere ike ịta ahụhụ nnukwu nsogbu ahụ ike.
N'agbanyeghị ọghọm na ọghọm ndị a, na Perricone nri bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na arọ ọnwụ ụzọ na ụwa na e nwere ọtụtụ nke ama ndị kwadoro ụdị nri a. N'ime ha, onye na-agbachitere ndị isi bụ Queen of Spain na nke ahụ bụ Oriakụ Letizia ọ ghọọla mgbasa ozi kachasị mma maka ụdị nri a.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịmalite ụdị nri a ka ị ghara ịhapụ kilogram ole na ole, closeaa ntị nke ọma na-esote video ebe ọ bụ na ọ ga - enyere gị aka ịmatakwu banyere nri Perricone a ma ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Ihe oriri nke Perricone
Ihe ndabere nke ikpo ọkụ, ndụmọdụ bara uru
Usoro nri nke na-eme ka mgbaàmà dị mfe maka ndị nwere ogbu na nkwonkwo